Tra-tehaky ny Zandary ireo jiolahy telo voarohirohy tamin'ny vaky trano tao amin'ny Kaominina Anivorano Avaratra, Distrika Antsiranana II, taorian'ny fahazoana ny loharanom-baovao avy tamin'ny tsara sitrapo. Tratra tany amin'izy ireo fitaovana maromaro fampiasan'izy ireo mamaky trano, sy ny basy mahery vaika iray, miaraka amin'ny bala 29, ary basim-borona iray, an’ny jeneraly nisotro ronono izay Ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Fitaovana anisany lasan'ireo jiolahy nandritra ny fahavakisan-tranony tany an-toerana ireo.
Namoaka ny andiany faha-6 na ny 6ème Promotion mitondra ny anarana EZAKA ka nisafidy ny Governora Daritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore ho « Ray mpiahy na Parrain ». Notontosaina ny alatsinainy 09 Novambra ny lanonana famoahana na « sortie de promotion ».Ny Promotion EZAKA dia tanora miisa 92 vita fiofanana ho mpampianatra rehefa avy niofana nandritra ny 02 taona. Hoy Andriamatoa Governora : « Nanaiky ho Ray mpiahy an’ity andiany ity ny tenako satria manan-danja loatra amiko ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana, no sady laharam-pahamehana amin’ny Fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Andry Nirina RAJOELINA, ao amin’ny VELIRANO FAHA-4 ».
Efa-taona nilanjana galona hisandohana ho Polisy ity lehilahy iray, 31 taona, vao sarona. Ananany avokoa ireo karazana fanamian'ny Polisim-pirenena, ary ireo galona manomboka amin’ny Inspecteur hatramin’ny Commissaire de Police. Manana basy izy, basy vita gasy miisa telo entiny manararao-pahefana sy mitaky vola aman’olona.Mbola niaraka tamin’ny fanamiana Polisy sy galona kaomisera izy no tra-tehaky ny Polisy teny Ambohitsoa Antananarivo. Voasambotry ny Polisy ihany koa ireo olona miisa telo nivarotra basy vita gasy taminy. (Jereo Sary Tohiny)
Niharan’ny herisetra ara-nofo i Meltine, zazavavy kely 11 taona. Lehilahy, 35 taona, no nahavanon-doza. Namoy ny ainy noho ny ratra nahazo azy i Meltine, ny atoandron'ny 09 novambra 2020, tao Ambodiakondro, Fokontany Saora/Sud, Kominina Mahabo, Distrika Vohipeno, Faritra Vatovavy Fitofivany. Voasambotry ny Fokonolona ilay mpanolana. Napetraka anaty trano mba hialàna amin'ny fahatezeram-bahoaka.Nahazo antso fanairana mikasika ity tranga ity ny Zandarimaria dia nidina avy hatrany tany an-toerana niaraka tamin'ny mpitsabo mpitsirika. Rehefa tonga tany an-toerana anefa ireo Zandary dia efa hita nananto-tena samirery tao anatin'ilay trano nasiana azy ilay mpanolana. Ny tady namatoran'ny Fokonolona azy ihany no voavahany ka nanantonany ny tendany ka nahafaty azy. (Jereo Sary Tohiny)
Sary : PMPM
Voasambotry ny Polisin'ny PMPM Antsirabe ny lehilahy anankiray nanolana zazavavikely 10 taona. Fantatra fa efa naharitra herintaona no nanaovan'ity tovolahy ity ny filan-dratsiny saingy rahonany hovonoina ilay zaza ka tsy sahy niteny. Ny fizahana nataon'ny mpitsabo dia nanamafy fa nisy tokoa ny tranga fanolanana.Hatolotra ny fitsarana anio ny raharaha.
Notanterahina ny 4 novambra 2020 ny tsatoka angady voalohany amin’ny fanamboarana CEG Manarapenitra ao Soamahamanina, Distrika Miarinarivo, Faritra Itasy. Efitrano vaovao 24 no hatsangana amin’izany.Sady tsy maharaka ny isan’ny mpianatra intsony ny efitrano fianarana misy ao amin’ity CEG ity no efa tranainy avokoa.
Namoahan’ny Polisim-pirenena filazana fikarohana i Natacha sy Haingonirina Serge Aimé. Voarohirohy ho amina raharaha fivadiham-pitokisana, halatra ary fanamboarana sy fampiasana taratasy hosoka izy ireo. Niasa tamin’ireny « microfinance » na orinasa mpampindram-bola madinika ireny izy ireo.
Voasambotry ny Polisy misahana ny ady heloka bevava sakelika fahefatra ireo andian-jiolahy saika hanao fanafihana teny Namontana, Boriborintany fahaefatra Antananarivo Renivohitra. Efa-dahy niaraka tamin'ny basy miisa 02 nisy bala no tra-tehaka voalohany, fa tafatsoaka nandritra ny fifanenjehana. Tra-tehaka teny Ambohibao ny jiolahy 01 tafatsoaka tetsy Namontana. Tetsy Mahamasina ny jiolahy fahaenina. Rehefa nosavaina ny tranon'ity farany dia nahitana basy mahery vaika "fusil d'assaut Ak 47 " sy « boite chargeur » miisa 06 tao aminy. (Jereo Sary Tohiny)
Malagasy miisa 20 (ahitana zaza tsy ampy taona miisa 07) niondrana an-tsokosoko an-tsambokely niazo an’i Mayotte. Roa andro teny ambony sambo kely izy ireo raha niala tao Nosy-Be. Tratran'ny Polisy tany an-toerana izy ireo ka naverina teto Madagasikara. Nanao ny fanadihadiana mahakasika ity fiondranana ity ny Polisy Malagasy ka olona miisa 03 no voasambotra. Tao anatin'ny famotorana no nahalalana fa mifampiraharaha amin'ireo tompona sambo any avaratra (Ambanja, Nosy Be) ireto olona voasambotra ireto hitondra olona any Mayotte.
Navoakan’ny Governemanta japoney ny 3 novambra 2020 ny lisitry ny fanolorana mari-boninahitra ho an’ny taona 2020. Tamin’ity taona ity dia notolorana an’i Ramatoa Mireille Mialy Rakotomalala, Ambasadaoron’i Madagasikara tany Japana sy Mininistry ny Kolontsaina sy ny Vakoka teo aloha ny mari-boninahitra “Ordre du Soleil Levant, Etoile d’Or et d’Argent”. Ity mari-boninahitra ity dia nomena azy noho ny anjara biriky noentiny tamin’ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin’i Japana sy Madagasikara. Ramatoa Mireille Mialy Rakotomalala dia fantatra tamin’ny fikelezany aina ho amin’ny fampiroboroboana ny fifanakalozana sy ny fifankazahoana teo amin’i Japana sy Madagasikara.